သင်စုဆောင်းလိုလျှင်၊ သင်၏အရည်အချင်းများတိုးတက်စေရန် (သို့) လယ်ပြင်၌အလုပ်ရလိုလျှင် [Genvers]
ဆောက်လုပ်ရေး / မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ / ဆောက်လုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Hokkaido နှင့် Tohoku
ထောက်ခံအကြံပြုထားသောလုပ်ငန်းခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု (တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ)
Climber Co., Ltd.Ibaraki စီရင်စုareaရိယာ
အတွေ့အကြုံမရှိသူများကို ရှာဖွေနေပါသည်။လူငယ်တွေ တက်ကြွတယ်။​လေ​ကြောင်းအလုပ်​မ​ကောင်း​တွေ​တောင်​အဆင်​​ပြေပါတယ်​ ☆ ​ဘေးကင်း​အောင်​ ​ဘေးကင်းစွာနဲ့ ​စေတနာအပြည့်​နဲ့ သင်​​ပေးမှာပါ ♪
Ichidai Co., Ltd.Ichikawa / Funabashi / Urayasu .ရိယာ
[ငြမ်းဝန်ထမ်း] တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဝင်ငွေမြင့်မားမှုသည် သဘာဝကျပါသည်။ ဒါတွေအားလုံးက "ဝန်ထမ်းတွေ အဆင်ပြေပြေအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်" ကို ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ ▼ နေ့စဥ်လစာ အာမခံချက် ▼ အိပ်ဆောင် အပြည့်အစုံ ▼ အပိုဆုများ ▼ နေ့စဥ်ငွေပေးချေမှု ညှိနှိုင်းမှု ▼ လွတ်လပ်သော ပံ့ပိုးကူညီမှု ရရှိနိုင်သော [Folkman simultaneous recruitment]
လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ထမ်းအသစ် (တစ်နိုင်ငံလုံး)
ခ၊ခ အလုပ်သမားKoshiya / Soka / Misato .ရိယာ
[အဲဒါက ကုမ္ပဏီ ငယ်တုန်းပဲ!အတူတကွ ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်သူများကို ရှာဖွေပါ။ ] အတွေ့အကြုံရှိပြီး အတွေ့အကြုံမရှိသူများ ခေါ်ယူခြင်း။၎င်းသည် အနာဂတ်တွင် အသုံးဝင်ပြီး ဘယ်သောအခါမှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်သော ခေတ်ဟောင်းနည်းပညာများကို အမွေဆက်ခံနိုင်သော ရှားပါးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပျိုခိုးဝေ !
ID ဆောက်လုပ်ရေး Co., Ltd.Koshiya / Soka / Misato .ရိယာ
Tobi Nitta Gumi ကုမ္ပဏီလီမိတက်Koshiya / Soka / Misato .ရိယာ
Toko ★ Saitama ဧရိယာတွင် အဓိကအားဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သော လူများ အမြန်ခေါ်ယူခြင်း။ ★ အတွေ့အကြုံရှိသူ နေ့စဉ် လစာ 1.9 ~ ☆ အတွေ့အကြုံမရှိသူ 1.4 စတင် ★ မတူညီသော လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ပြောင်းလဲရန် ပံ့ပိုးမှု။သင့်အလုပ်နှင့် လူနေမှုပုံစံတွင် နယ်နိမိတ်အသစ်ကို ရှာဖွေနေပါက စိတ်မပူပါနှင့်။၎င်းသည် ★ အိပ်ဆောင်ပြီးပြည့်စုံသော၊ ဝေးကွာသောလျှောက်လွှာကို ကြိုဆိုရန် ★ ကူညီပေးပါမည်။
အိုကီမူရာSaitama / Toda / Kawaguchi .ရိယာ
အလုပ်သည် လွယ်ကူသည် ♪ "သန့်ရှင်းရေး၊ ရိတ်သိမ်း၊ အမျိုးမျိုးသောသန့်ရှင်းရေး" အသက်အရွယ်မခွဲခြားဘဲ အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်သော လွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်သည် ။
ရေပိုက်သမားများ ခေါ်ယူခြင်း။East Plant Co., Ltd.
၀၃ ・ ၆၂၂၀ ・ ၁၉၀၂
လစာ XNUMX - Kasukabe မြို့၊ Saitama စီရင်စု
၀၄၈၊ ၇၂၀၊ ၈၇၉၄
စွန်နက် ၃၅၀,၀၀၀-ပိုက် ၂၄၀,၀၀၀-၊
ငြမ်း ◆ ခက်ရင်း ◆ တည်ငြိမ်ပြီး မြင့်မားသော ဝင်ငွေရရှိရေး
အလုပ်ရလွယ်ကူမှု ယုံကြည်မှု Ali ◆ Chiba၊ Ichidai
၀၄၇ ・ ၄၀၂ ・ ၃၃၃၀
ငြမ်း ~ ရက်ပေါင်း2ပေးဆောင်★လုံခြုံရေးနေ့ 1 အဆောင်
ယန်း ၆၀၀၀၀ ကို am Sagamihara Co. , Ltd မှဂုဏ်ယူပါတယ်
XNUMX tundora မြင့်မားသောလစဉ်ဝင်ငွေရှာဖွေမှု
တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေရလိုသူများအတွက် Sawada Construction သို့သွားပါ
Tobi ငြမ်း ရေပိုက်သမား စုဆောင်းရေး
အတွေ့အကြုံမရှိသူများပင် ဝင်ငွေရှာနိုင်သော Tobi/ငြမ်း
နိုင်ငံခြားသားများကို ကြိုဆိုပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များကို ပေးဆောင်ပါ။
[Kashiwa] ပုံသွင်းလက်သမား / ဖျက်သိမ်းသည့်အလုပ်သင်ကို OK
နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှု။အိပ်ဆောင် ပြီးပါပြီ။ ၃ စားစရာရှိတယ်။
နေ့စဉ် လစာ XNUMX အာမခံ Plant Engineering Co., Ltd. TTP
လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ထမ်းများနေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂ လစာ၊
ash အတွေ့အကြုံမရှိသူများသည် Yashio Tojuki ကိုကြိုဆိုကြသည်
ငြမ်းနှင့်မြေကြီးအလုပ်၏အရေးပေါ်စုဆောင်းမှု! ယန်း ၁၂၀၀၀ တက်သည်
တည်ငြိမ်ပြီးမြင့်မားသော ၀ င်ငွေ Sadagumi Edogawa ရပ်ကွက်
လုံးဝအခမဲ့ဆိုင်းစနစ် ◎ တစ်ပတ်လျှင် XNUMX-XNUMX OK
Landscaping / လက်သမား / Multi-skilled Worker Yokohama Sunny
တစ်ပတ်လျှင် ၂ ရက်၊ အားလပ်ရက်အပြည့်၊ ကုမ္ပဏီအိမ်ယာရနိုင်သည်။
နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှု၊ အဆောင်ရရှိနိုင်ရန်၊ တစ်ပတ်လျှင် ၂ ရက်၊
1.1-1.8 Ogino Co. , Ltd.
အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်တောင်မှ နေ့စဥ်လစာ ယန်း ၁၃၀၀၀ မှ
ပြုပြင်မွမ်းမံရေးဝန်ထမ်း အမြန်ခေါ်ယူ MCD Co., Ltd.
"ဆိုက်" "လက်ဖြင့်အလုပ်" "ဝင်ပါ"Genba စုဆောင်းမှု site ၏အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။
Genver's သည်လယ်ပြင်အခြေပြုအလုပ်သတင်းအချက်အလက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ “ လယ်ပြင်”၊ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး၊ နယ်မြေအလိုက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေ။ အလုပ်ရရန်၊ ငွေရှာရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ဟီဂျကာကာကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်သူများ၊ သူတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းများကို အသုံးပြု၍ အလုပ်ပြောင်းလိုသူများ၊ လမ်းကြောင်းအသစ်များကိုစိန်ခေါ်လိုသူများ၊ ဤအရပ်မှလူလတ်ပိုင်းအရွယ်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများစသည်တို့အတွက်။ ကောင်းမွန်သောဘဝနှင့်ဘဝ။ကျေးဇူးပြု၍ Genvers တွင်အလုပ်တစ်ခုရှာပါ။
On-site ကိုအလုပ်အထူးပြုGenvers သည်လုပ်ငန်းခွင်တွင်အထူးပြုထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်နှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအားသူတို့၏အလုပ်အကိုင်နှင့်အရည်အချင်းများကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ၍ အသုံးဝင်သောအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်များကိုဂရုတစိုက် ရွေးချယ်၍ ပေးပို့နိုင်သည်။
ဒေသနှင့်အလုပ်အကိုင်အရရှာဖွေပါGenvers များကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။သင်လုပ်လိုသောandရိယာနှင့်အလုပ်အကိုင်ကိုသာရွေးချယ်ပါ။အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလုပ်သတင်းအချက်အလက်ပစ္စည်းများအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အသေးစိတ်အတည်ပြုပြီးနောက်သင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောလျှောက်လွှာနည်းလမ်း။Genvers အသစ်ဖြင့်စတိုးဆိုင်တစ်ခုလျှင် ၃ မိနစ်စာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်စက္ကန့် ၃၀ (တစ်ချက်နှိပ်ရုံ) လျှောက်ထားနိုင်သည်။သင်လျှောက်ထားလိုပါကအသင်းဝင်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေပါသည်။မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားခြင်းတို့သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းမှအချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်သည်
အဆိုပါအင်္ဂါရပ် icon တစ်ခုဖြစ်သည်!Genvers တွင်နေ့စဉ်ငွေပေးချေခြင်း၊ အဆောင်၊ အဆင်ပြေသောကားများ၊ Chika ဘူတာစသည့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအနေဖြင့်လိုအပ်သောအရာများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပြသထားသည်။အလုပ်စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လက္ခဏာများကိုသင်အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သည့်အတွက်အလုပ်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
Nightwork ယောဘသည် Caba သရဖူ
© 2019-Field အလုပ်ခန့်အပ်မှု site Genvers